किया टेलुराइड बन्यो ‘वर्ल्ड कार अफ द इयर २०२०’, अन्य पुरस्कृत कार कुन ? | Automotive News Nepal
किया टेलुराइड बन्यो ‘वर्ल्ड कार अफ द इयर २०२०’, अन्य पुरस्कृत कार कुन ? २७ चैत, २०७६
प्रत्येक वर्ष हुने वर्ल्ड कार अफ द इयर अवार्डको घोषणा यो वर्ष न्युयोर्क अटो शोमा गरिने योजना थियो । तर उक्त अटो शो कोरोना भाइरसका कारण नहुने भए पछि हालै सो अवार्डको घोषणा लाइभस्ट्रिमको माध्यमबाट अनलाइन रुपमा गरिएको छ ।
यस अनुसार वर्ल्ड कार अफ द इयर २०२० बनेको छ किया टेलुराइड । टेलुराइड कियाको फुल साइज, थ्री रो एसयूभी हो । यसले सूचीमा रहेका २९ गाडीहरुलाई पछि पार्दै सो उपाधि हात पारेको हो । सो अवार्डको लागि रनर अपको प्रतिस्पर्धामा माज्दा ३ र माज्दा सीएक्स–३० थिए ।
त्यसैगरी कियाकै सोल ईभीले वर्ल्ड अर्वान कार अफ द इयर २०२० को उपाधि प्राप्त गरेको छ । यसले मिनी कुपर एसई र फक्सवागन टी–क्रसलाई पछि पार्दै सो उपाधि हात पारेको हो ।
कियाले पहिलो पटक टेलुराइड र सोल ईभीमार्फत पहिलो पटक वर्ल्ड कार अवार्ड्सको टाइटल प्राप्त गर्न सफल भएको हो ।
यसैगरी डबल अवार्ड प्राप्त गर्न सफल अर्को कम्पनी हो पोश्र्चे । पोश्र्चेको टेक्यानले वर्ल्ड पर्फमेन्स कार अफ द इयर र वर्ल्ड लक्जरी कार अफ द इयर २०२० को अवार्ड जित्यो ।
त्यसैगरी माज्दा ३ ले वर्ल्ड कार डिजाइन अफ द इयर २०२० पायो ।
विश्वका विभिन्न क्षेत्रका प्रतिष्ठित ब्यक्तित्वहरु सम्मिलित रहेको वर्ल्ड कार अफ द इयर ग्लोबल जुरीले सो अवार्ड विजेताहरु छनोट गरेको हो । सन् २००३ बाट प्रदान गर्न थालिएको सो अवार्डले अटोमोटिभ इन्डष्ट्रिजको विश्व बजार र अन्य पक्ष पहिचान गर्न सहयोग गर्छ । यो अवार्डमा प्राइम रिसर्चको २०१९ मिडिया रिपोर्टमा आधारित भई विजेताहरुको छनोट गरिन्छ ।
ललितपुर - ललितपुरको लगनखेलस्थित कर्मचारी संचय कोष भवनमा रहेको ललितपुर मलले न...
काठमाडौं – तराई द्रुतमार्ग नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण
काठमाडौं – राष्ट्रिय गौरवको उच्च प्राथमिकता प्राप्त काठमाडौं – तराई दु्रतमार्ग स...